Nne - Bezzia | Bezzia
Buru nne Ọ bụ oge dị oke mkpa na ndụ ụmụ nwanyị, otu n'ime oge kachasị mma na ndụ ha kamakwa otu n'ime ndị na-ebu ọrụ dị ukwuu. Ya mere, site na Bezzia anyị chọrọ inye gị ndụmọdụ ka usoro a wee bụrụ nke a na-emekarị: site na afọ ime na obi abụọ nwere ike ibilite n'oge a maka agụmakwụkwọ nke ụmụaka mgbe ha dị obere.
Na nne A ga-enwe ọtụtụ isiokwu na-adọrọ mmasị maka ụmụ nwanyị nwere ụmụaka: nri ole ị ga-eri ma ọ bụ na ha agaghị eri n'oge afọ ime, mkpa ọ dị igwu egwu na ụmụ ọhụrụ, ndụmọdụ maka oge ezé na-ada ma ọ bụ otu esi akpa agwa ma ọ bụrụ na ị nwere karịa otu nwa.
Ọzọkwa, ọ gaghị abụ naanị ndụmọdụ na ozi bara uru, mana ha ga-anwa ịtụgharị uche na ụwa dị mgbagwoju anya nke ịbụ nne. Ọnọdụ ọhụrụ maka ọtụtụ mmadụ mana nke ahụ mechara bụrụ otu n'ime oge kachasị mkpa na ndụ.
por Maria Jose Roldan eme Ụbọchị 3 .
Ndị nne na nna niile kwenyere na ịzụ na ịkụziri nwata abụghị ọrụ dị mfe yana ...
Ị Toụbiga mmanya ókè abụghị nsogbu na -eme naanị ndị okenye, ebe enwere ike nwee ...
Idebe imi n'ime ụmụ ọhụrụ bụ ọrụ ndị nne na nna ga -emerịrị nke ọma na nke ọma. Ọ bụ…
Ọrịa Crohn na ụmụaka na ndị nọ n'afọ iri na ụma
Ọrịa na -ebute afọ na eriri afọ na -aghọwanye ihe a na -ahụkarị na ụmụaka ...
Ọmịiko n'ebe ụmụaka nọ
Mmetụta ọmịiko bụ otu n'ime ụkpụrụ dị oke mkpa maka mmadụ. Ọ bụ ikike nke bụ ...
Otu esi egbochi ụmụaka ịrọ nrọ ọjọọ
Ọ bụ ihe dị otú o kwesịrị na ụmụaka ndị na -eto eto nwere ike na -arọ nrọ ọjọọ. Eziokwu bụ na m maara ...
Ịdị ọcha nke ọma n'oge ime
por Maria Jose Roldan eme Ọnwa 2 .
N'agbanyeghị nchegbu ọtụtụ ụmụ nwanyị dị ime, isi anụ ahụ siri ike, ọkachasị n'akụkụ ime, bụ ihe ...
Migraine na ụmụaka na ndị nọ n'afọ iri na ụma
Ihe data na-egosi na migraine bụ ụdị isi ọwụwa kachasị na mbara ụwa. Na…
Gịnị bụ ihe ọjọọ?
Ọ bụ ihe dị mma na ọtụtụ ụmụ nwanyị 48 awa mgbe ha mụsịrị nwa, na-ata ahụhụ ike dị na akpanwa….
Mkpa ọ dị ahụike ahụike na ụmụaka
Ọ bụ mmadụ ole na ole maara n’ezie ihe ọgụgụ isi nke mmetụta uche bụ. Akụkụ a gafere kpamkpam ...
A na-akpọ afọ nke toki na-eto eto
por Maria Jose Roldan eme Ọnwa 3 .
Ọ dịghị onye na-agbagha eziokwu ahụ na ọ dịghị mfe ma ọ bụ dị mfe ịzụlite nwa. Niile nkebi ...
Ihe kpatara mmekọahụ ji afụ ụfụ mgbe a mụsịrị nwa
Ọnụnọ nke ndị nne na nna ọ na-emetụta ndị na-eto eto?
Ajuju na Azịza Banyere Oruaka
6 ụzọ dị mfe iji wepụ egbugbu nwa oge
Oedipus na Electra mgbagwoju anya, mma nke ụmụaka na nne na nna ha